Chimpanzee, Shimbiraha, Ilaalinta Duurjoogta ayaa hadda ku dhamaatay kaynta Bugoma ee Uganda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Chimpanzee, Shimbiraha, Ilaalinta Duurjoogta ayaa hadda ku dhamaatay kaynta Bugoma ee Uganda
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah
Ugaandha, Chimpanzee Sanctuary iyo Ilaalinta Duurjoogta Trust, Ururka Qaranka ee Xirfadlayaasha Deegaanka (NAPE), ECOTRUST, Ururka Dalxiiska Uganda, Ururka Dalxiiska Dalxiiska Uganda (AUTO) Ururka Ilaalinta ee Bugoma Forest iyo Tree Talk Plus ayaa u dagaalamaya Kaynta Bugoma si loo badbaadiyo.
Lix shaqaale oo ka tirsan Machadka Maamulka Tamarta Afrika (AFIEGO) oo uu ka mid yahay agaasimaha guud Dickens Kamugisha ayaa lagu xiray laguna xiray Uganda saldhigga booliiska Kiira, Kampala 22 -kii Oktoobar 2021 iyagoo ku shaqeynayay ruqsad la’aan.
Arrintan ayaa lagu xaqiijiyay qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee AFIEGO wax yar ka dib markii la xiray.
AFIEGO waxay joogtay Xarunta Ololaha #saveBugomaforest ee galbeedka Uganda ka dib 5,779 hektar hektar oo kaynta 41,144 hektar ah ayay Boqortooyada Bunyoro Kitara ka kiraysay Hoima Sugar Limited si ay u koraan sonkorta.
Machadka Afrika ee Maamulka Tamarta (AFIEGO) waa shirkad Ugaandha ah oo fulinaysa cilmi-baaris siyaasadeed iyo u doodid si ay saameyn ugu yeelato siyaasadaha tamarta si ay uga faa'iideysato dadka saboolka ah iyo kuwa nugul.
Laga soo bilaabo Agoosto 2020, markii ardada makaanikku ay u guuxeen nolosha iyada oo qayb ka ah mashruuc horumarineed oo la isku haysto, dadka deegaanka iyo kooxaha bulshada rayidka ah ee hoos yimaada ololaha Save Bugoma Forest waxa ay wadeen dagaal sharciyeed sare.
Xiritaanka ayaa yimid kadib go’aan ay soo saartay Maxkamadda Sare ee Uganda Qeybta Madaniga Musa Sekana bishii Sebtember 2021.
Ka dib markii lagu xukumay Boqortooyada inay kirayso qayb ka mid ah keymaha ka dib markii AFIEGO iyo Shabakadda Biyaha iyo Deegaanka (WEMNET) ay dacwad ka gudbiyeen Wakaaladda Maareynta Deegaanka Qaranka (NEMA) si ay u ansixiso warbixinta qiimeynta saamaynta deegaanka iyo bulshada (ESIA).
Warbixinta waxaa si been abuur ah u soo bandhigtay Hoima Sugar Limited iyadoo sheegtay in kaydka ay rabeen inay u adeegsadaan wax soo saarka sokorta ay tahay dhul daaqsimeed oo xaaluf ah oo aan saameyn ku yeelanayn soohdimaha kaynta. Waxaa la sheegay in ay ku dhagan tahay kaynta Bugoma in kasta oo sawirka dayax-gacmeedku muujinayo liddi ku ah.
Kaynta Bugoma waa kayn kulaylaha ah oo la ilaaliyo oo ku taal koonfur-galbeed ee Hoima iyo waqooyi-bari ee magaalooyinka Kyenjojo, iyo bariga harada Albert, ee degmada Hoima ee galbeedka Uganda. Waxaa la daabacay 1930 -yadii waxayna hoos imaanaysay waaxda Maamulka Kaymaha Qaranka 2003
1dii Agoosto 2016, Komishanka Dhulka Uganda ayaa soo saaray Lahaanshaha Dhul 5,779 hektar (22 Mayl laba jibaaran) Boqortooyada Bunyoro Kitara taaso
Dhulka waxaa isla markiiba laga kireeyay Hoima Sonkor. Bishii Maajo 2019, Garsooraha Maxkamadda Sare ee Degmada Masindi, Wilson Masalu wuxuu ku tiirsanaa marqaatiga Guddoomiyaha Dhulka iyo Mappings, Wilson Ogalo dacwad ka dhan ah Maamulka Kaymaha Qaranka (NFA)
Garsooraha ayaa xukumay isagoo cuskanaya markhaatiga, 5,779 hektar ee Keydka Bugoma ee Kaydka Bugoma ayaa loo tixgelin lahaa inay ku taal meel ka baxsan kaynta.
Sidaa darteed waxaa lagu xukumay dhulka lagu muransan yahay Omukama (Boqorka Bunyoro). Xukunkan ayaa boqortooyadu u furtay gacan xor ah si ay dhulka uga kireyso Hoima Sonkor.
Qorshaha komishanka Ogalos ayaa ah mid sifo ah ka dib diidmadiisa inta lagu guda jiro baaritaan la mid ah oo ku saabsan burburinta kaynta Kisankobe ee degmada Mukono Oktoobar 2020.
Waxaa hogaaminaya Kamgusha, ololaha #SaveBugomaForest wuxuu ugu dambeyntii gaaray Rt. Guddoomiyaha baarlamaanka Uganda Jacob L'Okori Oulanyah Chambers Khamiista 9-ka Sebtembar 2021.
Bulshooyinka ku nool hareeraha kaynta Bugoma ayaa ku baaqay in la ilaaliyo keymaha Waxay sidoo kale doonayaan in baarlamaanka uu ka doodo mooshin ku saabsan badbaadinta keymaha. Mooshinku wuxuu ku jiray warqadda dalabka ilaa iyo Sebtember 28, 2021.
Codsi ayaa la gudbiyay si loo joojiyo burburinta Kaymaha Dhexe ee Bugoma.
Codsiga waxaa saxiixay in ka badan 20, 000 oo qof oo deggan 30+ tuulo oo ku yaal degmooyinka Kikuube iyo Hoima.
Degmooyinkan ayaa hoy u ah keymaha halista ah. Noocyada kaynta waxaa ka mid ah Uganda Mangabey, Chimpanzees, iyo shimbiraha.
Codsigan ayaa lagu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo burburinta joogtada ah ee kaynta Bugoma lana badbaadiyo nolosha bulshada deegaanka lana ilaaliyo dhaxalka dabiiciga ah ee Uganda.
Gudoomiyuhu waxa uu arinkan u gudbiyay guddi baarlamaani ah oo u qaabilsan deegaanka.
Codsiga waxaa sidoo kale taageeray ururada kale ee bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan Machadka Afrika ee Maamulka Tamarta (AFIEGO), Biyaha iyo Deegaanka, Shabakada Warbaahinta (WEMNET), Xarunta Ilaalinta Deegaanka ee Chimpanzee iyo Ilaalinta Duurjoogta, Ururka Qaranka ee Xirfadlayaasha Deegaanka (NAPE), ECOTRUST, Dalxiiska Uganda Ururka, Ururka Hawl-wadeenada Dalxiiska Uganda (AUTO) Ururka Ilaalinta Kaymaha Bugoma iyo Tree Talk Plus.
Intii u dhaxaysay Agoosto iyo Sebtembar, maroodi kaynta iyo laba chimpanzees ayaa meydkooda laga helay dhulka kaynta ah taas oo ka dhalatay iskahorimaadkan bini'aadamka iyo duur-joogta ah iyadoo xooluhu ay fuuq baxeen iyadoo keynta ay ku qasbeen inay cunto u raadsadaan beero ay leeyihiin. beelaha jaarka ah.
Tan iyo markii la bilaabay nadiifinta kaynta, chimpanzees xanaaqsan iyo xoolihii duurjoogta cararaya ayaa weeraray tuulooyinka ku hareeraysan waxayna weerareen dalagyadooda.
AFIEGO ayaa sidoo kale waxaa la kulmay cadaadis aad u weyn sababtoo ah difaacidda xuquuqda bulshada ay saameysay saliidda ee degmada Hoima. Si la yaab leh waxaa sidoo kale difaacaya Boqortooyada Bunyoro Kitara.
Bishii Sebtembar 2020, Venex Watebawa iyo Joshua Mutale, weriyeyaal WEMNET ah ayaa lagu xiray Hoima xilli ay u socdeen inay ka qeybgalaan bandhigga hadalka raadiyaha ee Spice FM.
Booliska Uganda ayaa isku dayay in ay hor istaagaan ololaha #savebugomaforest.
Sifaynta AFIEGO ayaa ah tii ugu dambaysay ee xadhig xidhidh tan iyo bishii Agoosto 2020, dhawr urur oo aan dowli ahayn ayaa ku lug lahaa hawlaha xuquuqul insaanka, dadka uu saameeyay mashruuca saliida cayriin iyo deegaanka ayaa la joojiyay hawlahooda ka dib markii ay ku xoqeen dawladda hab qaldan.
Guddoomiyaha Degmada Deggan Kikube Amian Tumusiime ayaa oggolaaday maadaama uu ku eedeeyay qaar ka mid ah hay'adaha dowladda dhexe iyo Boqortooyada Bunyoro Kitara musuqmaasuq ka dhashay ku guuldareysiga in la furo soohdimaha Kaymaha Bugoma markii laga jawaabayay walaacyada ay ka qabaan wada-xaajoodyada ilaalinta bulshada ee ay abaabuleen Isbahaysiga La-dagaallanka Musuqmaasuqa. .